Anyị nwalere ngwa Hama "Ndị na - akpata ya" | Akụkọ akụrụngwa
Anyị nwalere ngwa ngwa Hama Influencer
Miguel Hernandez | | Ngwa, Ngwa
More na ndị ọzọ ọdịnaya na-emepụta site na ekwentị mkpanaaka na n'aka nke na-iwesa site na ekwentị mkpanaaka. Anyị ga-agwa gị ihe nzuzo, vidiyo m na nyocha m mepụtara na ama, ị ga-echekwa ihe aghụghọ bụ iji nweta ezigbo nsonaazụ, ebe anyị na-eji ụdị a ngwa.
Hama eweputala usoro nke ihe eji eme ya ka imara ihe kachasi nma gi na Instagram, YouTube ma obu ebe obula ichoro. Chọpụta anyị nke bụ ngwa ndị a dị mkpa, otu ha si arụ ọrụ na ihe kpatara ha ji bụrụ akụkụ nke gị melite maka nsonaazụ ọkachamara.
1 Ikanam ìhè mgbanaka
2 Igwe okwu lavalier maka nsonaazụ kacha mma
3 Hama 4-in-1 Tripod
Ikanam ìhè mgbanaka
Obi abụọ adịghị ya na nke a dị m ka ihe kachasị mkpa n'ime ngwaahịa niile anyị na-enyocha taa. Ihe mgbanaka ọkụ ndị a abịala iji dozie nsogbu nke tupu anyị ejiri nnukwu ihe ọkụkụ dozie ya, ugbu a n'ime obere ohere anyị nwere ihe anyị chọrọ.
Ndị a Ikanam hoops Kwe ka anyị nwee ihu anyị ma ọ bụ ngwaahịa anyị na-enyocha, na-enye ohere na a ga-ahụ ihe niile nke ọma na enweghị ndò, si otú a nweta nsonaazụ ọkachamara, na-elekwasị anya na ihe dị mkpa, na ịhapụ ọchịchịrị na mkpọtụ na onyonyo ahụ.
Kpọtụrụ mgbanaka ahụ mgbanaka ọkụ Hama Ọ na-ewepụta ìhè nke ihe ruru 6000K, enwere ike ịgbachi ya anya. Tụfuo 128 LEDs Na ihe ijuanya na, ọ na-eri obere obere ma na-agbakọta, yabụ anyị ga-ebufe ya na akpa ya.
Hụ akwụkwọ data ngwaahịa: Jikọọ
Ọ nwere mgbanaka 10,2-anụ ọhịa ma gụnye nkwado na-aga ibugharị na etiti ahụ nke ga-enyere anyị aka ịnweta ekwentị anyị ngwa ngwa. Anyị nwere ọdụ ụgbọ USB yana eriri njikwa nke ga-eme ka anyị nwee ike ịhazigharị ya, yana gụnyekwa onye na-ahụ maka Bluetooth ka anyị nwee ike idozi ndekọ ahụ.
Anyị nwere ike ịgbatị hoop ruo 138 centimeters, nke kachasị dị obere bụ 52 cm. O juru m anya na n'ihi ọdịdị ya na njem anyị, anyị nwere ike iji ya dịka oriọna. Nke ahụ ga-adabere na gị, mana ọ dị mma maka ịbudata, nhazi nkuzi na blọọgụ vidiyo.
N'aka nke ọzọ, dịka uru anyị nwere na anyị nwere ike ịgbanye mgbanaka n'ọtụtụ ụzọ. Na ule anyị ọ dịla mma na ụda agba atọ karịrị oke iji nweta nsonaazụ ọma n'ozuzu ya. Typesdị ihe ndị a dị mma maka ndekọ. Ngwaahịa a bụ ebe ire ere gị site na euro 69,00.
Igwe okwu lavalier maka nsonaazụ kacha mma
Mgbe ọkụ, ọdịyo bụ nnukwu ihe ịma aka nke abụọ maka ndị na-eme ihe ike. Mgbe anyị na-achọ ihe ngwọta nye isi ọwụwa a, ọtụtụ oge anyị na-achọta nhọrọ dị oke ọnụ ma ọ bụ buru oke ibu, agbanyeghị, ahụmịhe na-agwa m na ọ karịrị iji ezigbo igwe okwu lavalier.
Na nke a Hama na-apụkwa izute ya Smart Lavalier, igwe okwu lavalier nke emebere maka PC, ese foto na ekwentị mkpanaaka, dakọtara na ihe niile. Ọ nwere eriri nke mita isii, ihe dị ịrịba ama karịsịa.
Igwe okwu a nwere oge dị n'etiti 50 Hz na 20 KHz na enweghị isi nke 2200 Ohm. Dika enwere ike ịtụ anya ya n'ihi ọdịdị ya na ike ya, anyị na-ekwu okwu banyere igwe okwu nduzi niile, ya bụ, anyị agaghị etinye ya n'ụzọ pụrụ iche iji jide ụda anyị n'ụzọ ziri ezi.
Akwụkwọ data ngwaahịa> Jikọọ.
Iji bụrụ nke ziri ezi, anyị nwere uche nke 45 dB na ule anyi o nwegoro nke oma. Tụkwasị na nke a, achọpụtara m na ọ dị iche na igwe okwu a nwere batrị na onye nchịkwa nke na-enye anyị ohere ịhazigharị ya maka igwefoto na smartphones (na-enweghị iji batrị).
Ọ nwere obere okpu na-egbochi ụda iwe na ikuku na kwa obere clip Site na nke anyị nwere ike ịgbanye ya na uwe elu anyị ma ọ bụ ebe ọ bụla anyị chọrọ n'ụzọ dị mfe, nke a kachasị mma yana karịa ihe zuru oke maka ọtụtụ mmadụ, ya bụ, ọ bara uru itinye ego ọtụtụ narị euro?
Emebere ngwaahịa a site na Hama naanị euro 34,95 ọ ga - adịkwa na isi ire ere mbu. Igwe okwu lavalier Hama Smart Lavalier bụ ezigbo ndị enyi maka ndị chọrọ imepụta vidiyo maka YouTube ma ọ bụ gwa ndị ha zụtara ihe kachasị ọhụrụ na Instagram: igwe okwu omnidirectional dabara adaba maka ndekọ vidiyo na vidiyo.
Hama 4-in-1 Tripod
Nke atọ oké ngwaahịa maka ụbọchị anyị taa dị ka ndị na-egbu egbu O doro anya na njem ahụ, ka ọ bụ na ị ka na-ahapụ mkpanaka gị ịdabere na igbe akpụkpọ ụkwụ?
Man, a tripod bụ nditịm mkpa na nke a ọzọ na Hama-enye gị bụ ezigbo. Nke a tripod nwere opekempe dị elu nke 20cm yana oke dị elu ya na ogwe aka ya telescopic nke na-erughị 90 centimeters, ya bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu mita, ubụ ezigbo nkasi obi.
A na-emepụta ya na ngwakọta nke plastic na aluminom, mana anyị ga-ekwusi ike na akụkụ ala nwere na roba na-enweghị amị amị na agba uhie nke na-enyere anyị aka nke ukwuu mgbe ịtụkwasị tripod ahụ ebe anyị chọrọ. Mkpokọta ibu nke njem ahụ bụ naanị gram 185, ihe ọbụna tụrụ anyị n'anya.
Anyị na-eburu n'uche na anyị nwere ndị nkwụnye iji jiri tripod nwere sistemụ atọ dị iche iche: GoPro, smartphone nwere nkwado na-agbatị na igwefoto vidiyo ọdịnala.. Nsonaazụ dị mma ma ngwaahịa a kwụsiri ike na ule anyị, ihe a na-enwe ekele maka ya.
Otú ọ dị, anyị nwekwara njem pụrụ iche ọzọ maka ndị na-eme ihe ike, ihe hama tabletop tripod Ọ nwere ụkwụ nkwado atọ na isi abụọ na njide ekwentị, yana 4 mgbanwe ngalaba site na usoro ịmịgharị na-agagharị, na ntinye nke bọtịnụ n'ime ụkwụ tripod. Rubberkwụ roba ya na-enye nkwado siri ike na ebe dị ụtọ, na-amị amị na ahaghị nhata, ebe ọkwa afụ ya na-abanye n'ime isi njem. Enwere ike iji ya dika monopod ma obu dika njem. Ihe kacha mma bụ na mgbe apịaji, o siri ike na-ewe ohere: na a opekempe nke 16 centimeters (kachasị nke 19) na ịdị arọ nke gram 260, Enwere ike iburu n'ime akpa gị ma ọ bụ akpa akpa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Anyị nwalere ngwa ngwa Hama Influencer
Audio-Technica ATH-CK3TW, nke kacha mma? [Nyochaa]
Nyochaa Amazon Flex: Kedu ihe ọ bụ? Ọ bara uru?